> Resource> iPad> iPad ikuku File Nyefee: Nyefee faịlụ ka / si iPad ikuku hassle Kpamkpam
The iPad ikuku, nke ise iPad ọgbọ a tọhapụrụ. Nke a pụtara iPad ikuku bụ thinner karịa mgbe ọ bụla, ma na-agba ọsọ ngwa ngwa, na-enye gị a elu mkpebi, nke na-enye gị ahụmahụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ zụtara iPad ikuku, i nwere ike ike na-eche nyefee music, photos, videos na ndị ọzọ faịlụ na ya, otú i nwere ike igwu egwu na ya anya. Ime iPad ikuku faịlụ Nyefee, iTunes na iCloud dị mma helpers. Otú ọ dị, iTunes na-emekarị na-ata ahụhụ gị site na ngwa ngwa faịlụ transfer na data ọnwụ. Dị ka iCloud, unu na-eme n'aka na i nwere a WiFi netwọk na-ekwe nkwa na nkwado ndabere na Iweghachi usoro. N'agbanyeghị nke ahụ, akwusighi nke Wi-Fi netwọk nwere ike ime ka odida nke ịchọputa iDevice na faịlụ nyefe.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ ezuru si iTunes na iCloud na chọrọ agbalị ihe ọhụrụ, ị nwere ike na-atụgharị nke Wondershare TunesGo. Ọ bụ ezigbo iTunes ọzọ, ike ime ihe iTunes dara mkpụmkpụ. Na ya, i nwere ike nyefee music, photos, kọntaktị na vidiyo na iPad ikuku na-edebe ugbu a faịlụ àgwà na iPad ikuku. Ọ na-enye gị ike mbupụ videos na music ka iTunes na ndị ọzọ faịlụ, gụnyere photos, iMessages na kọntaktị na kọmputa. Ọzọkwa, ọ na-agba na-enweghị netwọk njikọ, na ọrụ na onye-kensinammuo interface na-eme ka ya onwe ya mfe aka.
Nkwadebe: Pịa Download button ibudata free ikpe version nke software dị ka gị onwe gị na usoro: Windows ma ọ bụ Mac. The Mac version na-aha ndị Wondershare TunesGo (Mac), na-enyere ị nyefee music, videos na foto ma ọ bụ site gị iPad ikuku mfe. Lee, m na-Windows version dị ka ihe atụ na-egosi na ị na iPad ikuku transfer usoro.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad ikuku na kọmputa
Wepụ Apple eriri USB na iji ya jikọọ gị iPad ikuku na kọmputa. Gbaa ndị software. Gị nkwụnye na iPad ikuku ga-adịghị anya achọpụtara. Mgbe ahụ ị ga-ahụ ya zuru ezu Ama gosiri na isi window, na ndị niile na faịlụ ẹdude ke gị iPad ikuku ga-egosi na edemede na hapụrụ sidebar.
Nzọụkwụ 2. File transfer maka iPad ikuku
1.Transfer music na vidiyo gaa na site na iPad ikuku
Iji nyefee music na vidiyo, ị nwere ike na-agbalị mkpirisi ụzọ. Na ala akara nke bụ isi window, ị pụrụ ịhụ Copy iDevice ka iTunes, Export Music ka iTunes, tọghata Music na tọghata video MP3. Pịa ha mbubata ma ọ bụ bupu music.
E wezụga Ụzọ mkpirisi, i nwere ike ime na music transfer na music window. Na-ekpe sidebar, pịa Media. N'elu akara bụ media ige: Music, Movies, Pọdkastị, TV na-egosi, Music videos, iTunes U na Audiobooks. Pịa otu media edemede ịbanye ya management window. Mgbe ahụ, ị nwere ike itinye, bupu ma ọ bụ hichapụ music na vidiyo.
2. iPad ikuku playlist transfer
All smart listi ọkpụkpọ na-ahụkarị listi ọkpụkpọ na gị iPad ikuku na-depụtara. Mgbe ahụ, ị nwere ike pịa Tinye mbubata listi ọkpụkpọ site na iTunes na kọmputa, ma ọ bụ pịa Mbupụ na mbupụ ha ka ha iTunes na kọmputa.
Cheta na: The Mac version adịghị ka ị mbupụ listi ọkpụkpọ, ma ị nwere ike mbupụ songs na ha.
3. Dọrọ na dobe foto na iPad ikuku
Site na ịpị Photos, ị pụrụ ịhụ Photo Library, igwefoto Roll na ọba (kere site na ịpị Tinye). Na nke a window, ị nwere ike mbupụ nchekwa, albums na ike ọhụrụ albums. Mepee a nchekwa, dị ka foto Library, ị nwere ike na-amalite nyefee photos ma si na kọmputa.
4. mmekọrịta kọntaktị na Outlook, tinye ọhụrụ kọntaktị ma jikota duplicates
Pịa Ndi ana-akpo na ekpe sidebar, na kọntaktị niile ga-emere na nri panel. Pịa Import / Export mbubata VCF faịlụ ma ọ bụ kọntaktị na Outlook, Windows Address Book na Windows Live Mail, ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị ha.
Mgbe ọtụtụ duplicates-egosi na gị iPad ikuku, ị nwere ike jikota ha site ìgwè nke mail, nọmba ekwentị na aha.
5. ndabere iMessages on iPad ikuku
Ga-amasị ndabere họrọ iMessages si iPad ikuku na kọmputa. Dị pịa SMS na-egosi ozi management. Ego gị chọrọ iMessages na pịa Export. Na ndọpụta ndepụta, họrọ a zọpụta ụdị si XML, TXT na HTML.
Cheta na: SMS na MMS na-ekwe ka kwadoo.